Umuntu ohlushwa isifo sikashukela uhlobo 1 noma 2 Kumelwe ukuqaphela ukuthi okwamanje amazinga kashukela egazini lakhe njalo. Njengomthetho, lezi izilinganiso kukhona isikhathi, ngaphandle indlela ngokwawo koda. indoda ngokuvamile iza kudivayisi ekhethekile ibhoboze umunwe ukubeka iconsi elincane legazi phezu strip test. Kukhona namanye amadivayisi ukuthi basuke itshalwe ngaphansi kwesikhumba isiguli. Kulokhu, bahlalele ukukala amazinga kashukela futhi ukudlulisa idatha ku nedivayisi yangaphandle.
Kodwa manje ithimba labacwaningi eHarvard University necebo okunye kunalokho ezithakazelisayo. Ukusebenzisa inki ekhethekile, ziye zasungula uphawu bioinformation ongashintsha umbala kuye ngokuthi ezingeni likashukela egazini.
Lezi uyinki ezikhethekile eyaziwa ngokuthi DermalAbyss. Okwamanje, basekuleso esigabeni yekutsi linike bufakazi njalo ke ayitholakali umphakathi. Ngenxa ekwakhiweni eziyingqayizivele uyinki wavunyelwa ukuqapha e-asidi emakamu sodium ne igazi glucose. Uma inani lemali glucose, isibonelo, iphakeme kakhulu, uyinki abe nsundu. Too sodium kakhulu - futhi luhlaza. imibala Purple futhi pink ukhombise noshintsho pH.
Uyinki DermalAbyss - indlela entsha biointerfeysu lapho ebusweni umzimba libonakala njengenhlangano isibonisi interactive, ichaza iqembu lososayensi kuleli kwezohwebo.
Uzokwenza kufanele kusho ukuthi inki ashukumisayo alikho ukuthintana ngqo ngegazi lakho. Empeleni, ukulawula uketshezi interstitial, okungukuthi, into ozungezayo kwezicubu cell emzimbeni isiphi isilwane noma umuntu. Through the ulwelwesi lwama-capillary ku uketshezi ngokuqhubekayo iwe amanzi, ion nezisombululo ezincane, kuhlanganise usawoti, ushukela, amafutha, amino acid kanye hormone.
Okwamanje inki kuphela ihlolwe ingulube isikhumba, okuyinto kakhulu efana neyethu. Noma kunjalo, ngokuqinisekile ngempumelelo, nakuba namanje kudingeke aqhube ukuhlolwa abantu ukuze baqonde kahle ukuthi kusebenza kanjani. Kubalulekile futhi ukuhlola ukuthi inki ukuba zibangele noma iyiphi ukusabela iguliswa nokuthi uyakuwaphula ngokuhamba kwesikhathi.
Isixazululo entsha yenkinga ubudala
Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, siyasibona kakade ngokuqiniseka ukuthi isixazululo abayeshwamayo nenhle yenkinga ukuthi akuyona ngempela kucatshangelwe isikhathi esithile. Kuyobonakala ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uma le ndlela iphumelela kakhulu kunalena eyedlule. Ngaphezu kwalokho, namanje koda, siqala kuphela esigabeni sokuqala, ngemva kwalokho-ke iba ingxenye biology yakho.
I abacwaningi baphawula ukuthi usebenzisa lezi uyinki ungenza Tattoos yanoma iluphi, ngakho umuntu ngamunye kungafani, kanye ezivamile.
Yini ukondla ingane nge Rotavirus: amamenyu, zokupheka kanye nemikhuba yokudla
Gynecological inqubo colposcopy kuyinto: kuyini futhi kanjani uzilungiselele wona?
Comedy Good wokubuka umndeni: uhlu
Anna tvoix rukax futhi unodoli wakhe